Myanmar Army reportedly kills five innocent civilians at Minbya | မငျးပွားမွို့ပျေါတဈဝိုကျ စဈတပျက အရပျသားငါးဦးကို သတျဖွတျ ဟု ဆို – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 23, 2020 December 10, 2021 kyaw zaw oo
Myanmar Army reportedly kills five innocent civilians at Minbya | မငျးပွားမွို့ပျေါတဈဝိုကျ စဈတပျက အရပျသားငါးဦးကို သတျဖွတျ ဟု ဆို
[ – English text first / Burmese text below – ]
Written by : Kyaw Zaw Oo (Spokesperson for Arakan Front Party)
Five civilians were killed by some Myanmarese Army troop for no reason at Minbya of Rakhine State yesterday on (22-04-2020), reliable local sources phoned me.
The Myanmarese troop, that were on their way back into the town, is said to have shotafarmer dead for no reason at Naram village around7pm yesterday. The 61 year old farmer, U San Oo Kyaw (son of U Hla Kyaw Phyu) was tending his cows when he was shot by the passing-by Myanmar troop.
And the same troopers proceeded into the town and, on reaching Pike-the quarter, they killed two Bengali Muslims on their way, people told me.
When they were nearing the town centre park, they got sight of two motor-cyclists and shot at them. They approached the two dying men on the ground, slit one victim’s throat and mutilated some parts of their bodies before they killed them, according to my local sources. These killings were made around7pm and it was two hours before9pm curfew.
Two victims, who were murdered in that downtown incident, were U Kyaw Myat Tun aka Tun Lone Chay [(31 year old), son of U Thein Maung] and U Than Tun [(32 year old), son of U Aung Kyaw Hla].
Our colleagues and I strongly condemn Myanmarese Army’s cruel killings of these innocent non-combatant civilians yesterday at Minbya.
Spokesperson for Arakan Front Party
မင်းပြားမြို့ပေါ်တစ်ဝိုက် စစ်တပ်က အရပ်သားငါးဦးကို သတ်ဖြတ် ဟု ဆို
Written by : ဦးကျော်ဇောဦး (ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)
ယမန်နေ့ (၂၂-၀၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့ ယနေပိုင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့ပေါ်နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့အချို့က လမ်းတွင်တွေ့သော အရပ်သား ငါးဦးအား အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည် ဟု ခိုင်မာသော ဒေသခံ သတင်းရင်းမြစ်များက ကျွန်တော့်အား ဖုန်းဖြင့် သတင်းပေးပို့ကြပါသည်။
တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းသည် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်း ခုနစ်နာရီခန့်တွင် မင်းပြားမြို့အပြင်ဘက်မှ မင်းပြားမြို့ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာရာ – နရမ်းကျေးရွာအရောက်တွင် နွားချည်နေသော လယ်သမား တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးစံဦးကျော် [ (အသက် ၆၁-နှစ်) အဖ ဦးလှကျော်ဖြူ ၏ သား] ကို အကြောင်းမဲ့ လှမ်းပစ်၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည် ဟု သိရပါသည်။
ထို့နောက် လာရာလမ်းတစ်လျှောက် ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်လာခဲ့၍ မင်းပြားမြို့ ပိုက်သည်အရပ် သို့ ထိုစစ်ကြောင်း အရောက်တွင် ဘင်္ဂါလီ မူဆလင် နှစ်ဦးအား ပစ်သတ်ခဲ့ကြသည် ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့နောက် ထိုစစ်ကြောင်းသည် မင်းပြားမြို့ထဲ၍ မြို့လယ်ပန်းခြံအနီးအရောက်တွင် လမ်းပေါ်၌ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဖြတ်သွားသည်ကို လူနှစ်ဦးအား လှမ်း၍ပစ်ပြီးနောက် ဒဏ်ရာရနေသော ထိုသူနှစ်ဦးထံ ချဉ်းကပ်ကာ လည်ပင်းလှီးခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများအား လှီးဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်လျက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည် ဟု ဒေသခံများက ပြောကြားကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်သည့်အချိန်တွင် ည ခုနစ်နာရီခန့်သာ ရှိသေးသည် ဟု ဆိုပါသည်။ မင်းပြားမြို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်မှာ ည ကိုးနာရီနောက်ပိုင်း မထွက်ရန် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မင်းပြားမြို့ထဲတွင် အသတ်ခံရသူ နှစ်ဦးမှာ – ဦးကျော်မြတ်ထွန်း (ခေါ်) ထွန်းလုံးချေ [ (အသက်-၃၁ နှစ်)၊ အဖ ဦးသိန်းမောင် ၏ သား ] နှင့် ဦးသန်းထွန်း [ (အသက်-၃၂ နှစ်)၊ အဖ ဦးအောင်ကျော်လှ ၏ သား ] တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
တိုက်ခိုက်ရေးသမားမဟုတ်သော အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများကို မြန်မာစစ်တပ်က ဤကဲ့သို့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှုများအား ကျွန်ုပ်တို့က ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချပါသည်။
ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ (ရခိုင့်ဦးဆောင်ပါတီ – AFP)
၂၀၂၀ ဧပြီလ (၂၃) ရက်
မငျးပွားမွို့ပျေါတဈဝိုကျ စဈတပျက အရပျသားငါးဦးကို သတျဖွတျ ဟု ဆို
Written by : ဦးကြျောဇောဦး (ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ AFP ၏ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ)
ယမနျနေ့ (၂၂-၀၄-၂၀၂၀) ရကျနေ့ ယနပေိုငျးတှငျ ရခိုငျပွညျနယျ မငျးပွားမွို့ပျေါနှငျ့ အနီးတဈဝိုကျတှငျ မွနျမာ့တပျမတျော တပျဖှဲ့အခြို့က လမျးတှငျတှသေ့ော အရပျသား ငါးဦးအား အကွောငျးမဲ့ သတျဖွတျခဲ့ကွသညျ ဟု ခိုငျမာသော ဒသေခံ သတငျးရငျးမွဈမြားက ကြှနျတေျာ့အား ဖုနျးဖွငျ့ သတငျးပေးပို့ကွပါသညျ။
တပျမတျော စဈကွောငျးတဈကွောငျးသညျ ယမနျနေ့ ညနပေိုငျး ခုနဈနာရီခနျ့တှငျ မငျးပွားမွို့အပွငျဘကျမှ မငျးပွားမွို့ထဲသို့ ဝငျရောကျလာရာ – နရမျးကြေးရှာအရောကျတှငျ နှားခညျြနသေော လယျသမား တဈဦးဖွဈသူ ဦးစံဦးကြျော [ (အသကျ ၆၁-နှဈ) အဖ ဦးလှကြျောဖွူ ၏ သား] ကို အကွောငျးမဲ့ လှမျးပဈ၍ သတျဖွတျခဲ့သညျ ဟု သိရပါသညျ။
ထို့နောကျ လာရာလမျးတဈလြှောကျ ရမျးသမျးပဈခတျလာခဲ့၍ မငျးပွားမွို့ ပိုကျသညျအရပျ သို့ ထိုစဈကွောငျး အရောကျတှငျ ဘင်ျဂါလီ မူဆလငျ နှဈဦးအား ပဈသတျခဲ့ကွသညျ ဟု ဆိုပါသညျ။
ထို့နောကျ ထိုစဈကွောငျးသညျ မငျးပွားမွို့ထဲ၍ မွို့လယျပနျးခွံအနီးအရောကျတှငျ လမျးပျေါ၌ ဆိုငျကယျဖွငျ့ ဖွတျသှားသညျကို လူနှဈဦးအား လှမျး၍ပဈပွီးနောကျ ဒဏျရာရနသေော ထိုသူနှဈဦးထံ ခဉျြးကပျကာ လညျပငျးလှီးခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျးမြားအား လှီးဖွတျခွငျးပွုလုပျလကျြ သတျဖွတျခဲ့ကွသညျ ဟု ဒသေခံမြားက ပွောကွားကွပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့ ဖွဈပကျြသညျ့အခြိနျတှငျ ည ခုနဈနာရီခနျ့သာ ရှိသေးသညျ ဟု ဆိုပါသညျ။ မငျးပွားမွို့တှငျ ညမထှကျရအမိနျ့မှာ ည ကိုးနာရီနောကျပိုငျး မထှကျရနျ သတျမှတျထားခွငျး ဖွဈပါသညျ။
မငျးပွားမွို့ထဲတှငျ အသတျခံရသူ နှဈဦးမှာ – ဦးကြျောမွတျထှနျး (ချေါ) ထှနျးလုံးခြေ [ (အသကျ-၃၁ နှဈ)၊ အဖ ဦးသိနျးမောငျ ၏ သား ] နှငျ့ ဦးသနျးထှနျး [ (အသကျ-၃၂ နှဈ)၊ အဖ ဦးအောငျကြျောလှ ၏ သား ] တို့ ဖွဈကွပါသညျ။
တိုကျခိုကျရေးသမားမဟုတျသော အပွဈမဲ့ အရပျသားမြားကို မွနျမာစဈတပျက ဤကဲ့သို့ ရကျရကျစကျစကျ သတျဖွတျမှုမြားအား ကြှနျုပျတို့က ပွငျးပွငျးထနျထနျ ရှုတျခပြါသညျ။
ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ (ရခိုငျ့ဦးဆောငျပါတီ – AFP)
၂၀၂၀ ဧပွီလ (၂၃) ရကျ
Previous How is Rakhine population left behind in Myanmar’s fight against COVID-19?
Next ကခငျြအမြိုးသားတို့အား ရခိုငျအမြိုးသားတို့က ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး ဖျောပွခကျြ